トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Horukon Works
Ukuba awuyazi kakuhle, elibe pa kule Horukon kukuba, kubonakala ekucingelwa abanye abantu ukuba babe mthethweni, ezifana kude, neloqobo ayikho nomatshini into enjalo. I Horukon, nguye segama khuba computer. Ethetha
ukuba enze umatshini le, kukho iinjongo ezimbini kalukhuni yahlulwe. Kwaye kuza ukusivumela up ngokuthi aggregating etafileni data, ezifana kwiintengiso ingeniso epheleleyo kwaye umzila, oko kuya kunyuka esweni le ubuqhophololo. Ngokufutshane, i Horukon, iya kuba into yokuba kumatshini elawula iinkcukacha. Okokuqala, lo ngowona data, umatshini kuba iye ukusivumela up idata Horukon kwamanye amalwimi ezifakiweyo kwiqonga omnye. Tsala iintambo evela
kuma, kuba yindlela ezifika iinkcukacha ngazo ukudibanisa kumatshini. Yiza data kukuba phezulu, kunye nokuthengiswa kunye nenzuzo gross netafile nganye, inani ukuqhuba kuyo, iinkcukacha ezifunekayo kwishishini, ezifana ibhola unit ixabiso yokuthengisa kwezinye, Horukon ebaprofetini ifumene uphawu etafileni, iya ukusivumela up okwixesha-lokwenene .
nje omnye ngomnye data, idatha ethile okanye idata kunye model weyunithi siqithi, kuye njengoko kunokubonwa iivenkile yonke data.
Ekubeni data uyeza ukuya kwinkonzo yexesha lenene, lembandezelo, njengaxa kukho ukunqongophala kweentambo nayo iye yaba lula ukuqaphela kwangoko. idatha yokuthengisa ezinjalo, ngokwemiqathango owenza ishishini, wena data kuyimfuneko.
kule nombolo ngokusekelwe, ndicinga ishishini ezifana ngemini elandelayo kwezikhonkwane uhlengahlengiso kunye nezicwangciso. Ngamanye amashishini, ndicinga ukuba akukho idatha yokuthengisa ngosuku olulandelayo yesicwangciso soshishino ayenziwanga sakhiwe, kodwa kunye elibe pa. Xa
akukho data, ishishini uya kuba nako ngawo onke. Njengoko bathi
ezitratweni, okanye ukulawula nganye Horukon, ibonisa ngathi ukuba ukulawula ngokukhululekileyo xa Uchikome njongo yokuthengisa hhayi ifakwe.
※ kunjalo, Kwakhona ukuva intetho, nesendlu pa nabo basoloko ukusebenzisa Horukon ukuba baxhotyiswe kunye nemisebenzi enjalo. Liya kubamba ngenxa inzuzo le nyaniso Horukon indlela bamba.